Shiinaha Customized boorsada milatari hal-garabka saarayaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada dhabarka shiraaca > Shandad milatari oo hal-garab ah
Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003 waana shirkad shiineys ah oo soo saarta bacaha. Ganacsigeena ugu weyn waa inaan qaabeyno, soo saarno oo iibino alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka ardayga, boorsooyinka shaati rullaluistemadka, boorsooyinka xafaayada, boorsooyinka lagu rido rullaluistemadka, boorsooyinka dibedda, boorsooyinka isboortiga, rucks, hal boorsooyinka garabka iyo waxyaabaha kale, iyo ayaa sidoo kale ballaarinaya ganacsiyada kale, sida naqshadeynta iyo soosaarka: bacaha dhexda, bacaha duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, boorsooyinka qoryaha, boorsooyinka taatikada ee militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo waxyaabaha kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo tayo fiican leh, waxaanna macaamiisheenna siin karnaa adeegga habeyn wax soo saar hufan, halka aan sidoo kale u bixin karno alaabteena tayada sare leh ee asalka ah macaamiisha iibka ah Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaan mudnaanta siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 ee mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab badan oo wax soo saar iyo shaqaale soo saar. Baaxadda weyn waxay noo oggolaaneysaa inaan si dabacsan u geyno khadadka wax soo saarka si loo gaaro hadafka wax soo saar hufan. Waxaan siinaa macaamiisha adeegyo isku dhafan oo ka imanaya nashqadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsada ama aad metesho astaanteena, fadlan nala soo xiriir: (ku qor halkan emailka shirkadda, guji si aad wax uga beddesho emaylka)
1. Soo bandhigida badeecada boorsada milatari ee hal-garabka ah:
(1) Dharka kore ee boorsada milatari ee hal-garabka ah waxaa laga sameeyaa 900D Oxford maro + PU dhar ah. Maadadani waxay leedahay xoog silibis adag iyo adkeysi abrasion. Cufnaanta sare ee dharka iyo dahaadhka biyaha celiya ayaa si wax ku ool ah u joojin kara biyaha roobka. Boorsada qoyan, isku-dhafkan wuxuu leeyahay waxqabad wanaagsan oo aan biyuhu lahayn iyo dhalaal sharaf leh. Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(4) Jiinyeerka sheyga ayaa ah qaybta ugu muhiimsan. Tayada sheyga ayaa sifeeya darajada sheyga, sidaa darteed waxaan isticmaalnaa jiinyeerka YKK ee aadka loo yaqaan iyo sumcadda caanka ah ee Shiinaha ee SBS.
Boorsadeena Milatari ee hal-garbaha ah.
(5) Xidho u adkaysta, biyuhu xiiqdaan, laalaabku u adkaysta, iyo xoqida u adkaysta. Hal xirmo oo labo ujeeddo ah, meel ficil ah, ayaa lagu rakibayaa alaabooyin shaqsiyadeed, dhar, buugaag, daawooyin, iwm.
2. Shandad milatari oo hal-garab ah
Xaddidyada alaabta (qeexitaannada)
Dharka Oxford + dharka PU
Dhererka 21cmX Width 16cmX Dhererka 27cm
Hal badeecad oo ku jirta hal bac bac ah, 20 kumbiyuutar / kartoon
Dharka, buugaagta, daawada
3. Astaamaha iyo codsiyada boorsooyinka milatari ee hal-garabka ah
(2) Waad u adeegsan kartaa inta lagu guda jiro xiisaha, socodka, socodka socodka, teleskoob, safarka raaxada, iyo fuulitaanka dhagaxa.
5. Baakadaha iyo rarka boorsooyinka milatari ee hal-garabka ah
Calaamadaha kulul: Boorsada milatari ee hal-garabka ah, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka